कांग्रेस नै सुहाउँछ, वाइसीएल नबन्नुस् प्रदीप पौडेलजी – NepalAustralianews.com
कांग्रेस नै सुहाउँछ, वाइसीएल नबन्नुस् प्रदीप पौडेलजी
June 3, 2017 विचार
प्रदीपजी ! तपाईंले कान्तिपुरमा ओलीलाई लेख्नु भएको यो पत्रको जवाफ लेख्न बसिरहेका बेला त्यही कान्तिपुर दैनिकको भोलिपल्टको पेज नम्बर ११ मा मेरा आँखा परे । एउटा समाचार शीर्षक छ, तपाईं पनि हेर्नुहोला– जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता । माओवादीले उसको हिंसाकालमा चलाएको समानान्तर अदालतले गरेका लिखतलाई रुकुममा अहिले कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको कुरा त्यहाँ छ पढ्नु होला । सुरुमै मैले यो प्रसंग किन उठाएको हुँ भने तपाईंका पार्टी सभापति शेरबहादुरको निजी स्वार्थका सामु कांग्रेसलाई यसैगरी सिद्धान्तच्यूत बनाउँदै लैजानु भयो र शेरबहादुरका अनगिन्ती विचलनको तपाईंजस्ता युवाहरु दास बन्दै जानु भयो भने बेलुका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएर सुतेको तपाईं बिहान उठ्दा वाइसीएलको सी ग्रेडको कार्यकर्ता बन्ने दिन आउन सक्छ । प्रधानन्यायाधीश विरुरुद्धको महाभियोग, आइजीपी प्रकरण, राजदूत प्रकरण र पछिल्लो पटक भरतपुर मतपत्र च्यात्ने प्रकरणमा तपाईंको पार्टीको भूमिका र चुनावमा तपाईंको पार्टीको गठबन्धनले यस सम्भावनालाई नजिक पुर्याएको छ । तपाईं कांग्रेसको भलो चाहनुहुन्छ भने ओलीका असल कामको विरोध गरेर होइन, शेरबहादुरका खराव काम सच्याएर मात्रै सम्भव छ प्रदीप पौडेलजी ।
प्रदीप पैडेलजी !
एउटा बदनाम सरकारमा हालीमुहाली गरेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तपाईं केपी ओली विरुद्ध खुलापत्र लेख्नु पर्ने कारण किन उत्पन्न हुँदैछ ? लोकमा केपी ओलीको चुलिंदो लोकप्रियता र कांग्रेसको चरम सैद्धान्तिक पतन र क्षतिको न्युनिकरण गर्न तपाईंले पत्र लेखेको पत्र पढेरै स्पष्ट हुन्छ । जसको सही उपचार केपी ओलीको विरोध होइन तपाईंको पार्टी सच्चिनुबाट बाहेक अन्यत्रबाट सम्भव छैन ।
कान्तिपुरमा छापिएको तपाईंले के पि ओलीलाई लेख्नु भएको खुल्ला पत्र पढ्ने मौका मिल्यो। तपाईंले सो पत्रमा नेपाली काङ्रेसको केन्द्रिय सदस्यको हैसियतले उठाउनु भएका अनेकन सवालहरुलाई केपी ओलिको पार्टिले कसरी जवाफ फर्काउला त्यो आफ्नै ठाँउमा छ तर वर्तमान राजनीतिलाई भु(तहमा बसेर हेरिरहेको म एक साधारण नागरिकले ति प्रश्नहरुलाई कसरी ग्रहण गरेको छु र बुझेको छु भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। यो हजुरको पत्रको राजनैतीक प्रतिउत्तर होइन, यो एउटा नागरिकले दिएको उत्तर मात्र हो ।
तपाईंले सुरुमै ओलीले अशिस्ट र अभद्र रुपमा कांग्र्रेस बिरुद्ध प्रचार युद्ध गरेको, पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले पाएको सिटप्रति आश्चर्य ब्यक्त गरेको भनी आरोप लगाउनु भएको छ । हो, मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ– संविधान जारी गरेयता कांग्रेसले देश र देशको सिस्टम विरुद्ध निभाएको खलनायकी भूमिकाका सामु यति धेरै सिट कांग्रेसले कसरी ल्यायो ? सायद यो प्रश्न तपाईंले शेरबहादुरलाई सोध्नु पथ्र्याे– संविधान जारी गरेपछि मुख्य दलहरुबीच सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने नीति ल्याएर कांग्रेस किन संविधान विरोधीहरुको पुच्छर सुम्सुम्याउन गयो ? भारतीय नाकाबन्दी र तराईंमा हिंसाको विरासत केपी ओलीलाई जिम्मा लगाएको कांग्रेस किन अमानवीय नाकाबन्दीमा मौन बस्यो ? तराईको हिंसालाई शान्त बनाएर रत्नपार्कमा केही दर्जन ब्यक्तिको रिले अनसनमा सिमित गरेका र भारतीय नाकाबन्दीलाई झुकाएका केपी ओलीको अन्धविरोध गर्नु पर्ने वाध्यता कांग्रेसलाई किन आइपर्यो ? अव कहिल्यै नेपालमाथि नाकाबन्दी लाग्न नसक्नेगरी उत्तरी छिमेकी चीनसित ओलीले पारवहन सम्झौता गर्दा कांग्रेसलाई किन टाउको दुख्यो ? युगौं युगसम्म भारतीय नियन्त्रणमा नेपालको राजनीति अस्थिर राख्ने उद्धेश्यमा कांग्रेस किन सामेल भयो ? हो यिनै भूमिकाका कारण नेपाली नागरिकले कांग्रेसलाई नरुचाएका हुन्, जुन भूमिका नसच्याएसम्म ओलीको विरोध गरेर कांग्रेसको साख फर्किंदैन प्रदीपजी ।
तपाईंले केपी ओलीको सरकारसँग स्थानीय चुनावको कार्यसूची नै थिएन भन्नेसम्मको आरोप लगाउनु भएको छ । केपी ओलीले नै संसदबाट अनुमोदन गराएका तीन तहको निर्वाचनका कार्यसूची संसद सचिवालयमा गएर हेर्नुस् । यस विषयमा यति भन्न सक्छु ओलीको सरकार रहेको भए गतवर्ष मंसिरमा स्थानीय चुनाव सकिन्थ्यो र अहिले प्रदेश वा संघीय संसदको चुनावको माहौल तातिरहेको हुन्थ्यो । अहिलेको सरकारले चुनाव टार्न कति पटक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नबाट भाग्यो ? ओली र नागरिकहरुको दवाव थेग्न नसकी वाध्य भएर बैशाख ३१ गतेका लागि तोकेको स्थानीय तहको चुनावी माहौल उत्कर्षमा पुग्न लागेका बेला त्यसलाई रोक्न दुई चरणमा चुनाव बाँड्यो । एक चरणको चुनाव भयो, अर्काे चरणका लागि तीनवटा मिति फेरिइसकेका छन् । तपाईंको दल र माओवादी गठबन्धनले चुनाव चाहेको थिएन, चुनाव टार्न असफल भएर चुनाव सफल बनाएको जस लिन खोज्दै हुनुहुन्छ । चुनावप्रति तपाईंको दल इमान्दार भएको भए बैशाख ३१ गते नै देशभर चुनाव सम्पन्न भइसक्थ्यो । राजनीतिलाई बाह्य नियन्णमा लैजान तराईका विभिन्न स्वार्थ समुहहरुको बेलुनमा हावा भरेर विदेशीका लागि स्ट्रेन्थ बनाइदिने काम तपाईंको दलले गर्यो ।
तपाईंले जसरी केपी ओलीले तराई पहाडलाई जोड्न नदिएको र कांग्रेसले जोड्न खोजेको तर्क दिंदै हुनुहुन्छ त्यसबाट मलाई लाग्छ तपाईंहरुले पढेको शब्दकोष र आम नागरिकले पढेको शब्दकोष नै फरक छ । पहाड र तराईलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै अलग प्रदेश बनाउँदा जोडिने र त्यहाँका लाखौं नागरिकले सडकमा उत्रेर हामी परापूर्व कालदेखि मिलेर बसेका छौं नछुट्याउ भन्दा फोडिने हुन्छ ? प्रदीपजीहरुको यस्तो अल्टर शब्दकोशले केही समय भ्रम बाँड्न सक्छ तर, ती सबै समाप्त हुन्छन् । अहिले भइरहेको पनि त्यही छ ।
रीतुले चुमिन पहिलो नेपाली साउथ अष्ट्रेलियन डान्सिङ्ग स्टारको ताज
पाँचौ अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन पर्थमा हुने